Malunga nathi - Hebei Weijia Metal mesh Co., Ltd.
U-Hebei Weijia Metal Mesh Co., Ltd, ngumnxeba ococekileyo wocingo kunye neeplatifti zeemveliso zeemveliso ezivela ngo-1997. Ifektri ivunyiwe yi-ISO 9001-2008. Iminyaka eli-10 yokuthumela amava ngokuthengisa kakuhle iinkonzo.Sinabasebenzi abamalunga ne-230 kwinkampani, umgca wentsimbi yokwenza umgca womatshini, umgca wocingo oluzenzekelayo, umgca wokusika, umatshini wokugoba, umatshini wokugoba, umatshini wokubetha, umatshini wokuqengqeleka kunye nokwenza iirobhothi.
"Imveliso esemgangathweni, ekuhanjisweni kwexesha kunye neenkonzo zoneliseko emva kokuthengisa" yifilosofi yethu yeshishini.
"Yenza ixabiso kulonwabo" yinkcubeko yenkampani yethu.
"Ukuphelisa intlupheko kwaye wenze ubomi bomntu wonke bube ngcono" yinjongo yethu.
● Ngo-1997 Kumiselwa (i-Weijia Metal Mesh Factory).
● Ngo-2008 Fumana isiqinisekiso sokungenisa nokuthumela kwelinye ilizwe (Hebei Weijia Metal Mesh Co., Ltd).
● Ngo-2012 Fumana isatifikethi se-ISO 9001.
● Ngo-2015 izixhobo zemveliso ezihambele phambili kunye nomgangatho omtsha wokusetyenziswa.
● I-2017 yaqala ukunikela ingqalelo kwisisa, ukunikela ngezithole zemithi yeziqhamo, iintlobo zehagu, njl.
● I-2019 igqibezele ukuguqulwa kwenkqubo yezabelo.
● I-2020 egqityiweyo yokuqinisekisa ishishini.
* Product kunye nexabiso mveliso enikiweyo.
* Umgangatho olungileyo ngesatifikethi se-ISO 9001 ukusukela ngonyaka ka-1997.
* Iqela lokuthengisa lobungcali kwaye liphendula ngokukhawuleza kumthengi kwiiyure ezili-12.
* Products ungenziwa ngemfuneko.
* I-logo yoMthengi kwiimveliso yamkelekile.
Ukusukela ngo-1997, Siqala ishishini lokwenziwa nothango lwentsimbi, i-frp nothango lwentsimbi kunye nocingo oluthambileyo ngentsimbi ukulungiselela iiprojekthi zokwakha nezokwakha. Ukugxila kwiimveliso ezisemgangathweni nasekuhanjisweni kwexesha, sifumene iimbasa ezininzi, ezinje nge "Shishini lokuthembeka", "Ifektri egqwesileyo", kwaye siyi-Sekela Mongameli we "Anping County Wire Mesh Chamber of Commerce".
Inkampani yethu ikholelwa ekubeni abasebenzi bubutyebi obuxabisekileyo benkampani, kwaye ikuncamathela ukubaluleka komanyano lwabasebenzi, ukukhula kwempilo yabo yengqondo, kunye nokuphuculwa kwezakhono zobungcali. Kwaye uququzelele ukwakhiwa kweqela elininzi leqela, intlanganiso yokukhuthaza ukutshintshiselana ngokuzonwabisa, kunye nokukhathalela amalungu osapho